china sameeyey am FM PCB radio saaraha circuit guddiga shirka pcba - PCB & Technologies Shiinaha Golden Saddex Xagalka
6L adag-hayalka san Board
Parameters Type:6L Rigid-flex Board Board thickness: 1.6mm Copper thickness: 1oz
14L adag-hayalka san Board
Parameters Type:14L Rigid-flex Board Board thickness: 1.3mm Copper thickness:1oz Highlight: Blind...
ParametersType:1L Rigid BoardBoard thickness: 1.6mm Copper thickness:1oz Highlight:Depth Routing
Parameters Type:6L Rigid Board Board thickness: 1.6mm Copper thickness: Inner Layer Hoz, external...
china sameeyey am FM PCB radio guddiga circuit saaraha shirka pcba
Shiinaha sameeyey am FM PCB radio guddiga circuit saaraha shirka pcba
Waxaan taageero wax soo saarka si degdeg ah 8 saacadood, waayo, PCB iyo 48-saarka deg deg ah waayo PCBA.
Files Codsaday Waayo, PCB iyo PCBA qiimesheegta
si -In si ay kuu siiyaan quote ugu hufan oo sax ah oo ku saabsan soo saarta unit codsaday, waxaan kaa codsaneynaa in aad na siiso macluumaadka soo socda:
file 1.Gerber, file PCB, file Eagle ama file CAD ayaa dhamaantood la aqbali karo
2.Waxaa biilka faahfaahsan oo ka mid ah maaddooyinka (BOM)
sawiro 3.Clear ee PCB ama muunad PCBA noo
4.Quantity iyo bixinta loo baahan yahay
hab 5.Test for PCBA in la damaanad qaado 100% wax soo saarka oo tayo fiican leh.
File 6.Schematics for design PCB haddii baahida loo qabo in la sameeyo baaritaanka shaqo.
Muunad 7.A haddii la heli karo, waayo, si wanaagsan qayblibaaxna
files 8.CAD for xero saarta haddii loo baahdo
9.A taararka dhamaystiran iyo sawiro shirkii muujinaya wax tilmaamaha shirka gaarka ah haddii loo baahdo.
1 Single iyo double dhinac SMT / PTH Haa
2 qeybo badan oo labada dhinac, BGA labada dhinac Haa
3 Chips yar size 0201
4 Min BGA iyo Micro BGA garoonka iyo kubada dacwadood 0.008in. (0.2mm) garoonka, kubada tirin weyn yahay 1000
5 qaybo Min sunta rasaasta ka dhistaan 0,008 ee. (0.2 mm)
6 Max Qaybo shirka size by mashiinka 2.2 in.x2.2in.x0.6in.
7 dusha Golaha Buur Xidhiidhiyayaasha Haa
8 Odd form parts:LEDResistor and capacitor networksElectrolytic capacitors
resistors doorsoome iyo capacitors (dheriyo)
Haa, Golaha by gacmaha
9 Wave kabida, Haa
10 Max size PCB 14.5 in. X 19.5 ee.
11 Min PCB dhumucdiisuna 0.02
12 Marks Fiducial Jeeclaadeen laakiin looma baahna
13 PCB Finish: 1.SMOBC/HASL2.Electrolytic gold3.Electroless gold4.Electroless silver
5.Immersion dahab ah
14 Qaab PCB Qof kasta oo
15 PCB Panelized 1.Tab routed2.Breakaway tabs3.V-Scored4.Routed + V dhaliyay
16 inspection 1.X-ray analysis2.Microscope in 20X
17 su'alaha 1.BGA saarista iyo bedelka station2.SMT IR Rework saldhigga Rework station3.Thru-dalool
qalabka MUUQAALKA soo saaridda
Fine garoonka placer MYDATA 9 MYDATA
All wareega-meelaynta MYDATA 12 MYDATA
Xawaaraha Sare placer Fine-garoonka MYDATA 15 MYDATA
Universal Chip Shooter HSP 4796 Universal qalabku
In-line madbacadaha EKRA E4 EKRA
PCB dhaqe Westek DI Westek
Electrovert & Vitronics Reflow Foornooyinka HBD Hot Air Reflow foornada HBD
adeegyada PCB OEM
OEM qalabka waa ka fog yahay!
From Input PCB Golaha SMT oo ka Wave kabida, in imtixaanka Card PCB, qalabka OEM loo isticmaalo si dhab ah waa heer caalami. Sida a keentay Daabacidda Circuit Board saaraha ee Shiinaha, waxaan leenahay waxa ay qaadataa luuqeeyo isticmaalaya qalabka gobolka-of-the-artOEM.
qalabka OEM in la ilaalinayo heerarka tayada
Waxaa jira dhowr Daabacidda Board Circuit saarayaasha in qirayaa in ay bixiyaan alaabta oo tayo leh. Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo ku dhici gaaban heerarka caalamiga ah. At Hypersonic, waxaan kibir qaataan qalabka our OEM, taasoo sare bar ah!
From tallaabo mid ilaa bixinta iyo baakadaha, aynu eegno galay si faahfaahsan kasta si aad u hesho wax soo saarka-waxqabadka sare ah. Our qalab OEM ina siinaysaa ku laayeen tartan inay ka sarro tartanka. Maanta, waxaan qaban tirada hal rigoore. Sida Daabacidda Circuit saaraha tayo leh guddiga ee Shiinaha, waxaan ku dadaalaynaa in la keeno si kaamil ah talaabo u soo dhawaaneysa.
1. Waxaan nahay saaraha xirfad leh waayo-aragnimo ka badan 15 sano ee ku yaala goobahan la injineernimada sare & koox-soo-saarka iyo qalabka wax soo saarka-dhamaadka sare.
2. Our alaabta uu joogsadey iyada oo UL 94VO iyo RoHS shahaadada.
3. 100% kormeerka QC hor Shipping
Previous: tayada a / c gacanta alaab-pcba guddiga PCB alibaba noocooda
2 Lakabka PCB
Guddiga Golaha Circuit
Guddiga Circuit Warshadaha
Custom PCB saaraha
U samaynta PCB hoggaamiyo
PCB Lakabka Double
PCB Golaha Electronic
PCB Good Tayada
GPS Tracker Small PCB
Tayada Sare ee ay hoggaaminayaan PCB
Hot Pot Induction Shooladda PCB
Isola Board Circuit
Hogaaminayo Warshadaha PCB
Mini GPS Tracker PCB
OEM PCB saaraha
Been abuurtay Golaha PCB
Golaha Board PCB
Warshadaha Board PCB
Guddiga Circuit PCB
PCB Circuit Guddiyada
Guddiga Control PCB
PCB Induction Shooladda
Warshadaha PCB Oo Assembly
PCB Iyada oo ka Kooban gundhig
Power kordhiyo PCB
Daabacidda Circuit Board
Circuit Golaha Board Daabacidda
Daabacidda Circuit Board-saaraha
Professional Warshadaha Board PCB
Qamaan Wireless xeedho PCB
PCB Lakabka Single
Smt dhex PCB
Ahama Steel Induction Shooladda PCB